မသီတာထွေးအမှု မနက်ဖြန် စီရင်ချက် ချမည် ~ Myanmar Express
ရမ်းဗြဲမြို့နယ်၊ သပြေချောင်းကျေးရွာမှ မသီတာထွေး အား အဓမ္မပြုကျင့်၍ ပစ္စည်းလုယက် သတ်ဖြတ်ခံခဲ့ရသည့် အမှုအား ရက်ရွှေ့ဆိုင်းခြင်းမရှိဘဲ ဆက်တိုက် စစ်ဆေးနေခဲ့ရာ တနင်္လာနေ့တွင် စီရင်ချက် ချနိုင်လိမ့်မည် ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။သောကြာနေ့ရုံးချိန်းတွင် ကျောက်ဖြူမြို့ခရိုင်တရားရုံး၌ စွပ်စွဲခံရသူ နှစ်ဦးအား စစ်ဆေးပြီး ၎င်းတို့ရှေ့နေ၏ လျှောက်လဲ ချက်အား ကြားနာပြီးနောက် တရားသူကြီး ဒေါ်ဌေးဌေးကြည် က ဆုံးဖြတ်ချက်ချရန်တနင်္လာနေ့ သို့ ချိန်းဆိုလိုက် ကြောင်း လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဦးဘရှိန်က ပြောသည်။“မနက်ပိုင်းမှာ တရားခံ နှစ်ယောက်ကို စစ်တယ်။ ညနေပိုင်းမှာ လျှောက်လဲချက် ကြားနားတယ်။ လာမယ့် ၁၈ ရက် နေ့မှာ ဆုံးဖြတ်ချက် ချမယ်ဆိုပြီး ရုံးချိန်းလိုက်တယ်။ ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ ကျနော်တို့က မှတ်ယူရမှာပေါ့။ များသောအားဖြင့် တရားသူကြီးတွေက ဘယ်နေ့ ဆုံးဖြတ်မယ်လို့ ရက်ချိန်းပေးလိုက်ရင် အဲဒီနေ့တွေမှာ ဆုံးဖြတ်တတ်တယ်။ အကြောင်း တစုံတရာ ထူးထူးခြားခြားရှိမှ နောက်နေ့တွေကို ရက်ချိန်း ရွှေ့တာတွေ လုပ်တတ်တယ်” ဟု ကိုယ်တိုင် ရှေ့နေကြီး တဦးလည်းဖြစ်သည့် ဦးဘရှိန်က မဇ္ဈိမကို ပြောသည်။ထိုအမှုနှင့်ပတ်သက်၍ စွပ်စွဲခံရသူ ရော့ပီးနှင့် ခိုချီး တို့ နှစ်ဦးက အဓမ္မပြုကျင့်မှု ကျူးလွန်ခဲ့ကြောင်း ဇွန် ၁၄ ရက်နေ့က ဝန်ခံဖြောင့်ချက် ပေးသော်လည်း လူသတ်မှုနှင့် လုယက်မှုကိုမူ မကျူးလွန်ခဲ့ကြောင်း ရုံးတော်တွင် ငြင်းဆိုထား၍ ၎င်းတို့ရှေ့နေမှ လျှောက်လဲချက် ပေးရခြင်းဖြစ်သည်။“အလေးက ဘယ်ဘက်က သာမလဲ။ မှန်မှန်ကန်ကန် သက်သေ ထင်ထင်ရှားရှားပြနိုင်တဲ့ ဘက်ကတော့ ထင်ရှားကြောင်း သက်သေပြပြီးပြီ။ တဘက်ကလည်း သူပြောတာ ထင်ရှားကြောင်း ပြနိုင်မှ တရားခံရဲ့ သက်သေပြမှုက ထင်ရှားမှာပေါ့။ တရားသူကြီးက ဘယ်လိုဆုံးဖြတ်မယ်ဆိုတာ ကျနော်မပြောနိုင်ဘူး။ ပြစ်ဒဏ်တွေကတော့ သေဒဏ် အထိ စီရင်နိုင်တဲ့ ပြစ်မှုတွေပဲ။ မုဒိန်းမှုကတော့ တသက်တကျွန်းလောက်ပဲ ရှိတယ်။ လူသတ်မှုကတော့ သေဒဏ်အထိ စီရင်နိုင်တာပေါ့ဗျာ” ဟု ဦးဘရှိန် က ပြောသည်။သောကြာနေ့ ရုံးတော်သို့ အရပ်ဘက်အုပ်ချုပ်ရေးမှ လူကြီးအချို့ လာရောက် နားထောင်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ထိုအမှုတွင် စွပ်စွဲခံရသူ သုံးဦးအနက် ထက်ထက် (ခ) ယော်ရှီး (ခ) ဖြိုးဇေယျာကျော် သည် ဇွန်လ ၉ ရက်နေ့ ညနေပိုင်းက ကျောက်ဖြူအကျဉ်းထောင်တွင် မိမိကိုယ်ကို အဆုံးစီရင်သွားခဲ့၍ ရော့ပီးနှင့် ခိုချီး တို့ဦး နှစ်ဦးသာ အမှုကို ဆက်လက်ရင်ဆိုင် သွားရန်ရှိသည်။ယင်းအမှုတွင် တရားလိုဘက်မှ သက်သေ ၂၄ ဦး၏ သက်သေထွက်ဆိုချက်များ ရှိပြီး စွပ်စွဲခံရသူများဘက်မှ လိုက်ပါ သည့် သက်သေ မရှိသေးကြောင်း သိရသည်။မေလ ၂၈ ရက်နေ့က မသီတာထွေး အဖြစ်အပျက်မှ စတင်၍ ရခိုင်ပြည်နယ်တွင်းတွင် လက်စားချေ သတ်ဖြတ်မှုများ၊ လူမျိုးရေး အမုန်းပွားမှုများ၊ ဆူပူအကြမ်းဖက်မှုများ ဖြစ်ပေါ်လာကာ လူပေါင်း ၃၉ ဦး အသက်ဆုံးရှုံးရသည်အထိ ဆိုးရွားလာခဲ့သည်။ဇွန်လ ၁၀ ရက်နေ့တွင် “အရေးပေါ် အခြေအနေ” ကို နိုင်ငံတော်သမ္မတ က ရခိုင်တပြည်နယ်လုံးအား ရက် အကန့်အသတ်မရှိ ထုတ်ပြန်ကြေညာထားသော်လည်း အခြေအနေမှာ ပုံမှန် တည်ငြိမ်ခြင်း မရှိသေး၍ ပြည်သူများနှင့် မီဒီယာများ ပူးပေါင်း လက်တွဲကြပါရန် အာဏာပိုင်များက နှိုးဆော်ထားသည်။Myanmar Express
17 June 2012 08:14
Death sentence for these2rohingya rapists and killers.
နှစ် ကောင် လုံး သေ ဒါ ဏ် နဲ့ ထောင် (၂၀) ချ ပါ၊ သေ ဒါ ဏ် ချ ပြီး မှ ၀ိညဉ် ကို ချုပ် ထားပါ
18 June 2012 01:04
These2Rohingya muslim also killed Rakhine girl Ma Thida Htwe. They lied that they didn't commit killing.
18 June 2012 01:06
All Rakhine people must protest in front of court for death sentence for these2Bangladesh Muslims rapists and killers.